WOWOW Tsala Phantsi iKitchen Tap I-Nickel eBrahshiweyo-IiFaucethi zaseKitshini eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Tsala iKhikhi yeKhikhi yeTephu yeNickel
Wowow Tyhila iKhitshi laseTephini yeBhrawuza yeNickel
Isiphatho esinye esisebenzayo, esithembekileyo nesikhuselekileyo sitsalela phantsi isitovu sekhitshi.
Gcina ixesha elininzi kunye nomsebenzi wobomi basekhitshini, nokuba kungococeko okanye ukupheka.
Isikhenkcisi sisebenzisa iinxalenye ezingundoqo ezingeniswe ngaphakathi ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Isikhenkcisi ekhitshini siyinkcinkce nge-2310201
Kutheni ukhetha isitofu somthi wasekhitshini esincinci esiphephezelayo ngaphezulu kwetawuli ekhitshini ye-chrome? Ewe, asikho apha ukuba sixoxe malunga nokunambitheka. Ukunambitha kuyenziwa kwaye nangayiphi na incasa kukho isisombululo esimnandi. Siyabona ukuba abantu abaninzi basathanda iikhitshi zekhitshi ye-chrome ngaphezulu kweefenisi ze-nickel. Nangona kunjalo, i-faickts ekhitshini ye-nickel yasekhitshini iphumelela ukuthandwa minyaka le. Ngaphandle kwento, uninzi lweemagazini zasekhaya zoyilo amaxesha ngamaxesha zibonisa iifayile zekhitshi ezi-nickel kwizakhiwo zabo zasekhitshini. Akunandaba nokuba imalunga nokuyilwa kweklasikhi okanye uyilo lwekhitshi langoku. Nangona i-chrome inika ukubukeka okukhanyayo ekhitshini, isuti yetouch ekhitshini e-nickel ngokuqinisekileyo yongeza uchukumiso lobuhle nakuluphi na uyilo lwekhitshi. Uninzi lwehotele ezinenkwenkwezi ezintlanu zinefitrit ze-nickel, njengoko zinika nje ukwahlula-hlukana ekhitshini. Ngezinto ezincinci ezinjengeefenitshala ekhitshini ungafezekisa impembelelo enkulu njengoko ubona.
Ngaba isitofu ekhitshini siyibhrawuza kwaye siyabiza kakhulu xa kuthelekiswa nefenitshala ekhitshi ye-chrome? Akunjalo. Ingakumbi hayi e-WOWOW. I-WOWOW ikwazile ukwenza inkqubo yokuthengwa kwayo ifikelele phezulu. Kwaye ngokudibeneyo neendawo zayo ezizenzekelayo zemveliso, I-WOWOW iyakwazi ukuvelisa izixhobo ezisemgangathweni zekhitshi ngamaxabiso afikelelekayo, nokuba zenziwe nge-nickel okanye i-chrome. Uya kuvuna izibonelelo ezivela kumava eWWOW ebanzi avelise iifenitshala ezikumgangatho ophezulu wasekhishini ezifuneka kwihlabathi liphela.
Yila isitofu ekhitshini esenziwe nge-nickel
Abaqulunqi abanesibindi be-WOWOW ngalo lonke ixesha baphatha ukuhambisa uyilo lwepheki ekhitshini oluya kufaneleka ngqo kulo naliphi na iphephabhuku loyilo lasekhaya elikhethekileyo. Le faucet ikhitshi ethile igreyiti ebonakalayo inika ubuhle obusemgangathweni, obunesitayile, kunye nobuchule bokusebenza kodwa osebenzayo. Uyilo lwayo lwanamhlanje, kodwa luya kulunga phantse kuyo nayiphi na ikhitshi. Onke amanyathelo kunye nokulinganisa kucingisiswe kakuhle kwaye uqaphela kwisiphumo sokugqibela sesi siqwenga sobugcisa basekhitshini.
Isikhenkcezisi esikhulu sekhitshi esiphakamileyo esine-nickel enikezela isitayile esihle, esibonisa isitayile ekhitshini lakho ngokubanzi kunye nekhitshi inyinyithe ngokukodwa. Ngenxa yokuba unokujika iphedi ephezulu yeekhitshi ze-arc, i-faucet yakho yasekhitshini ayiyi kuba ngendlela nangeliphi na ixesha. Unako nje ngokulula ukushenxisa itafile ephezulu ye-arc ukuya ngasekhohlo okanye ngasekunene ngendlela yokuba ufikelele ngokupheleleyo kwisinki yakho.
Isikhenkcisi sekhitshi elenziwa ngemisebenzi emininzi
Kuqala kwekhitshi le-WOWOW ekhitshini eline-nickel linikezela ngemisebenzi emithathu yamanzi. Ngomjelo wayo, isitshizi okanye imo yokuphumla ungasebenzisa isixhobo sokusebenza sekhitshi elenzelwe ukusebenza kwe-WOWOW yokugcwalisa amanzi, ukutshiza ukuze ucoce okanye unqumle ukuphepha ukutshiza. I-Neoperl ABS-aerator ephezulu kwetekhnoloji inokugcina amanzi ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50, oya kuthi uqaphele kwityala lakho lamanzi. Kwaye ngaphandle kokulalanisa ekusebenzeni komsinga. Okwesibini, eyona nto iphambili yale faucet yasekhitshini edlalwayo yitickel amanzi anokubakho. Unokutsala intloko yokutshiza kwisikhenkcisi ukuya kufikelela kuyo nayiphi na indawo ngaphakathi kunye nokujikeleza ikhitshi lakho. Xa ugqibile ngomsebenzi wakho wokucoca, intloko yesitshizi iya kubuyela ngokuzenzekelayo kwimeko yayo yoqobo.
I-lever inokusingathwa ngesandla esinye, ukuze uhlale unesinye isandla simahla kwimisebenzi yasekhitshini. Lever yekhitshi yasekhitshini ihamba kakuhle kwaye kodwa uqaphela izixhobo ezisemgangathweni ezisetyenzisiweyo. Awuyi kuvakalelwa kukuba ubuyela umva nangayiphi na indlela. Zombini iqondo lokushisa lamanzi kunye namandla amanzi anokulawulwa ngokulula kunye ne-lever yensimbi engenasici.
Izixhobo ezisemgangathweni zekhitshi lekhitshi
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-WOWOW isebenzisa kuphela izinto ezikumgangatho ophezulu ukuvelisa izixhobo zayo zasekhitshini. I-disc ye-disc umzekelo yenziwe nge-nickel e-brunch kwaye isitovu sesikhitshini ngokwaso senziwe ngentsimbi engenasici. Ngokudibeneyo kunye nolwakhiwo oluqinileyo lobhedu, isitovu ekhitshini esine-nickel ye-WOWOW ikuchasile ukukrala kunye nokudumba. Oko kwenza le ntetho ekhitshi yasekhitshini enomgangatho ophezulu.
Umbhobho wamanzi wokuphinda ungene lula kwiimitha ezili-1,5 zenziwe nge-silica gel. Ke ngoko ayinanxili kwaye iqinisekisa ukusebenza okutyibilikayo ngelixa ikhupha irose. Ngenxa yebhola esindayo njenge-counter weight, iintloko zokutshiza zifumana ukumelana ngokwaneleyo nokukunika intuthuzelo ephezulu yokuyiqhuba.
Isikhitshini ekhitshini elinexabiso elifanelekileyo lemali
Ngenxa yoyilo lwayo kunye nomgangatho wezinto zayo kunye nokugqitywa kwayo, uya kulindela ukuba le faucet yasekhitshini ixabiswe njengee-A-brand zehlabathi ezaziwa kwimarike. Kodwa akukho nto iyinyani! Le faucet ekhitshini i-nickel enexabiso eliphantsi ifikeleleka kakhulu kwaye nakwikhitshi loqulunqo lohlahlo-lwabiwo mali unganakho ukufumana le faucet yasekhitshini ehlonelwayo enikezela ukuqina kobomi obude ekusebenzeni okuphezulu.
Isiqinisekiso seminyaka emihlanu sisebenza kuninzi lweekhitshi zasekhitshini zeWOWOW. Ku-WOWOW sinethemba elikhulu ukuba ikhitshi lethu lasekhitshini le-nickel liya kusebenza kakhulu kwaye alizukubangela ngxaki. Ukuba isitovu ekhitshini esine-nickel asinakuyenza ngendlela ebeya kufuneka sisebenze ngayo, siya kuyibuyisela imveliso ngaphandle kwengxaki. Uya kuqinisekiswa ngomgangatho oqhubekayo kunye nokusebenza ngalo lonke ixesha.
Ukufakwa kwetawuli ekhitshini kufakwe i-nickel
Isikhenkcisi sekhitshi esityhutyhukileyo siza neTekhnoloji yokuThuthukisa okuKhawulezayo. Ngenxa yokwakhiwa kwayo kokuqala, kuyinto elula ukuba ungafakwa ngokwakho. Awuyi kufuna iplamu enokuxabisa imali eninzi. Ngezixhobo ezifakiweyo, isikhokelo sofakelo kunye nevidiyo yokufaka kwi-intanethi, uya kuba nakho ukufaka le ntshini yasekhitshini i-nickel kwimizuzu nje engama-30.
Ayothusi into yokuba ikhitshi levenkile ekhitshini eligalelwe i-NOWOW alisebenzi kuphela emakhaya, kodwa amashishini amaninzi njengeendawo zokutyela kunye nemivalo bayasisebenzisa esi isusiwe ekhitshini. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, isitovu ekhitshini esine-nickel sinika ukuphuculwa okuyinyani nayiphi na ikhitshi. Kwaye kunye nokusebenza kwayo okuphezulu, ngokuqinisekileyo ilungele imivalo kunye neeresity, ngakumbi ezo zekhitshini elivulekileyo. Le ndlwana yekhitshi yoyilo iyinkcenkce edityanisiweyo inika udibaniso nakweyiphi ikhitshi. Uninzi lwabathengi bamazwe aphesheya baye bathembela i-WOWOW ngezixhobo zayo kunye nexabiso lemali elinikezelayo. Siqinisekile ukuba siza kuyithemba kwakhona!
Izibonelelo zomsebenzi wokuphelisa isitovu ekhitshini nge-nickel ngendlela engezantsi:
 Nika into eyonwabisayo kuyo nayiphi ikhitshi
 Uyilo oluhle kakhulu lwe-arc
 Izixhobo zesinyithi ezingazinzanga kunye nobhedu
Iindlela ezi-3 zamanzi
 Ukuphinda urhoxise amanzi
 Kulula ukuyifakela ngeTekhnoloji yokuThuthukisa okuKhawulezayo
I-SKU: 2310201 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Thatha iipompu zekhitshi tags: Uqhekeze uNickel, I-Hole enye, spray
55 x 28 x 7 cm; 2.58 Iikhilogram
I-nickel ebrashiweyo 700